lending8, Author at Mission Asset Fund - Page7of 10
स्वागत कारमेन चान, DREAMSF फेलियो!
भेनेजुएलाका एक सपना देखी कारमेनले आफ्नो कथा साझा गरी र अविवाहित युवाहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने सपना देखी।
कारमेन चान हालसालै MAF टोलीमा आउटरीच फेलोको माध्यमबाट सामेल हुनुभयो सैन फ्रान्सिस्को नागरिक संलग्नता र आप्रवासी मामिलाहरूको कार्यालय ' DREAMSF फेलोशिप। DREAMSF फेलोशिप DACA- अनुमोदित युवाहरूका लागि सैन फ्रांसिस्को आप्रवासी समुदायहरूको सेवा गर्ने अवसर हो जबकि बहुमूल्य पेशेवर अनुभव र प्रशिक्षण प्राप्त गर्दै। हामीसँग कार्मेनले काम गरेकोमा हामी उत्साहित छौं र उनको अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट केहि थोरै बाँड्न चाहन्छौं!
१. कुन कुराले तपाईंलाई ड्रीम एसएफ फेलोशिपमा लागू गर्न प्रेरित गर्नुभयो?
म गर्मीमा केही गर्न खोज्दै थिए र त्यसपछि मेरो शैक्षिक सल्लाहकारले मलाई ड्रीम एसएफ फेलोशिपको बारेमा एक ईमेल पठाउनुहोस्। म पनि अप्रमाणित समुदायको लागि केहि गर्न चाहन्थें किनकि म कस्तो नेताको हुन सक्छु भनेर जान्न चाहन्थें। मैले आवेदन दिए र मलाई स्वीकार गरियो!
२. आफ्नो बारेमा हामीलाई थोरै बताउनुहोस्।
म भेनेजुएलामा जन्मे र हुर्कें। मैले भर्खरै सैन फ्रान्सिस्को स्टेट युनिभर्सिटीबाट स्नातक गरेँ। मैले स्यान फ्रान्सिस्कोको एभरेट मध्य विद्यालय र ग्यालिलियो हाई स्कूलमा पढेको थिएँ। म सान फ्रान्सिस्को आएको थियो जब म मेरा बाबुआमाको साथ १२ वर्षको थिएँ। मेरा आमाबुबा एक हप्ताको लागि बसे र तिनीहरूले मलाई र मेरो बहिनीलाई मेरो काकाको हेरचाहमा राख्ने निर्णय गरे। यो मेरो लागि गाह्रो थियो, किनकि मैले फेरि सुरु गर्नुपर्‍यो। म मेरो देशमा बस्न चाहान्छु, किनकि मेरो परिवारका सदस्यहरू र साथीहरू त्यहाँ बस्थे।
म आफूलाई दुई संसारका मानिस ठान्छु किनभने चिनियाँ संस्कृति हुर्किनु मेरो वरिपरि थियो र एक पटक म स्कूल जान्छु, भेनेजुएलाको संस्कृति एकदम प्रख्यात थियो। घरमा, मेरा आमाबुवाले मलाई चिनियाँ भाषा बोल्नुभयो र रीतिथिति र धर्मको बढ्दो महत्त्व थियो। उदाहरण को लागी, चीनियाँ नयाँ साल मा मेरी आमा चाँडै उठ्थ्यो र खाना तयार गर्न को लागी। मेरो मनपर्ने कुरा ब्यूँझिरहेको थियो र मेरी आमाको खाना पकाउन, रातो खाम, र आतिशबाजीको गन्ध लिइरहेको थियो। साथै, भेनेजुएला संस्कृति धेरै प्रख्यात थियो किनभने म मेरा धेरैजसो छिमेकीहरूको घरमा बिताउँछु। मलाई एरेपास, कापापास र सान्कोचो खाएको याद आयो। स्कूलमा, म बारियोका बच्चाहरूसँग खेल्थें। मैले भेनेजुएलाको सडक अप्ठ्यारो पनि सिकें।
भेनेजुएला जहिले पनि उथलपुथल हुन्छ। मेरो देश आज पनि विभाजित छ। मलाई याद छ म सानो छँदा ह्युगो चाभेज पार्टी र विपक्षी बिरूद्ध आन्दोलन र द्वन्द्वको कारणले गर्दा म स्कूलबाट छुटाएको थिएँ। मेरा अभिभावकहरूले सोचे कि उत्तम विकल्प अमेरिका आउने, मेरो शिक्षाको अध्ययन गर्ने र सुधार गर्ने हो। अहिलेको राजनैतिक अवस्था मैले छोडेको भन्दा खराब छ। मेरा अभिभावकसँग खाने को लागी शौचालय कागज वा खानको लागि कुखुरा पनि छैन। मलाई अहिले देश कस्तो छ भन्ने बारे साह्रै नराम्रो लाग्छ।
Some. केहि गतिविधि वा परियोजनाहरू छन् जुन तपाईं संलग्न भएको हुनुहुन्छ जुनमा तपाईं साँच्चिकै गर्व गर्नुहुन्छ?
जब म मा इंटर्न थिएँ सम्झौता, इंक, मैले एक एशियाई विद्यार्थीलाई उनको आर्थिक सहयोगमा सहयोग गरें। त्यसो गरेर मैले थाहा पाइन कि उनी AB540 थिइन र उनी यति छक्क परिन् कि उनका आमा बुबाले उनलाई आफ्नो स्थितिको बारेमा बताइनन्। एबी 40 40० २०० bill मा पारित गरिएको एउटा असेंबली बिल हो, जसले अनकन्डेमिडेन्ट बिद्यार्थीहरूलाई राज्य-शैक्षिक शुल्क तिर्न अनुमति दिन्छ। धेरै Undocumented विद्यार्थीहरू आफ्नो स्थिति निर्दिष्ट गर्न आफूलाई AB540 को रूपमा दर्शाउँछन्।
विद्यार्थीले मलाई धेरै सम्झाउनु भयो किनभने मेरा आमाबाबुले मलाई भन्नुभएन कि म undocumented थियो। मैले हाईस्कूलमा मेरो स्थितिको बारेमा थाहा पाएँ, जब मेरो हाईस्कूल काउन्सलरले मलाई भने कि म एफएएफएसएको लागि योग्य छैन। मेरो सल्लाहकारलाई मेरो अवस्थालाई के गर्ने भनेर थाहा थिएन किनभने म त्यसबेला सम्भवत पहिलो अविवाहित विद्यार्थी हुँ।
भोलिपल्ट, विद्यार्थी आएर मलाई भनिन् कि उनी कलेजमा जान चाहन्नन् किनभने यो एकदम महँगो थियो। मैले उनलाई भनें कि त्यहाँ छात्रवृत्ति मार्फत मद्दत प्राप्त गर्ने थुप्रै तरिकाहरू छन्। म उनलाई उपलब्ध सबै छात्रवृत्ति को लागी आवेदन गर्न प्रोत्साहित गरिरहें र उनले गरे। जब मलाई थाहा भयो कि उनले चार वर्षको छात्रवृत्ति सिटी कलेजमा पढ्न पाएकी थिएँ, म उनको लागि खुसी थिएँ। म अझै उनको फेसबुकमा सम्पर्कमा छु।
Why. तपाई किन एमएएफमा आउटरीच फेलोको रूपमा काम गर्न चाहानुहुन्छ?
वर्क परमिट हुनु मेरो लागि आँखा खोल्ने अनुभव भएको छ। मैले गल्ती गरे र मैले केहि महत्त्वपूर्ण ठूला पाठहरू सिके। उदाहरण को लागी, कर दाखिल गर्नु यति भ्रमपूर्ण थियो र मैले मेरो W-4 मा केहि गल्ती गरें। मलाई थाहा थिएन किन IRS ले मेरो पेचेकबाट पैसा लिन आवश्यक छ। मेरा केही प्रमाणित साथीहरूले मसँग क्रेडिट कार्डका लागि साइन अप गर्ने बारे कुरा गर्न सुरु गरे, किनकि क्रेडिट स्कोर बनाउनको लागि यो शुरू गर्नु महत्त्वपूर्ण थियो। म हराएको थिए र अलमलिएको थियो। म एमएफमा सामेल हुन चाहेको कारण यो हो कि म उनीहरूको वित्तको बारे मा धेरै Undocumented युवाहरुको लागि समर्थन र मार्गनिर्देशन प्रदान गर्न चाहन्छु।
Your. तपाइँ आफ्नो फेलोशिपको समयमा के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ?
म धेरै सीपहरू सिक्न अगाडि हेर्दै छु, विशेष गरी आउटरीचमा, किनकि म विश्वास गर्दछु आउटरीच एक शक्तिशाली उपकरण हो जसले समुदायलाई हामीले प्रभाव पार्ने समुदायलाई प्रभाव पार्न र सशक्त पार्न सक्छ। साथै, नेटवर्कि and र निर्माण जडानहरू।
Five. आगामी years बर्षमा तपाईका के के लक्ष्यहरू छन्?
म years बर्षमा आशा गर्दछु मेरो रोजगारी छ जुन मैले रमाईलो गरेको छु, विशेष गरी युवाहरू वा खाडी क्षेत्रका कम आय भएका समुदायहरूसँग काम गर्ने। म hope बर्षमा आशा गर्दछु कि मसँग मेरा बाबुआमालाई यहाँ ल्याउने सम्भावना छ। मैले लगभग १० बर्षमा मेरी आमालाई देखेको छैन र म उनलाई साँच्चै सम्झन्छु।
The. Dreamer समुदाय र undocumented अमेरिकन को लागी तपाइँको आशा के हो?
मलाई आशा छ कि चाँडै नै हामीसँग आप्रवास सुधार छ जुन सबैलाई समान रूपमा लाभान्वित हुनेछ, यो सुधार जसले युवाहरूलाई मात्र होइन, मेहनती अभिभावकहरूलाई पनि लाभान्वित गर्दछ। को बचपन आगमनको लागि आस्थगित कार्य यति धेरै सीमितताहरू छन्, जस्तै तपाईं १ age वर्ष उमेर भन्दा अघि अमेरिका आउनुपर्नेछ र जून १,, २०१२ सम्म तपाईंको उमेर under१ भन्दा कम हुनुपर्दछ, त्यसैले यसले प्रत्येक सपनाकारलाई फाइदा गर्दैन। मेरो एक नजिकको साथीले डिफर्ड एक्शनको लागि आवेदन दिन सकेन किनकि उनी २०० 2007 को जुलाईमा यहाँ आएकी थिइन् तर क्वालिफाइका लागि तपाईले जून २०० 2007 देखि अमेरिकामा बसोबास गरेको हुनुपर्छ। एक महिनाको अन्तरको कारणले, उनले डिफर्ड एक्शनका लागि आवेदन दिन सकेन।
हामी अहिले हार मान्न सक्दैनौं। अझै आशा छ। यो हाम्रो सपना को लागी लड्न कहिल्यै ढिलो हुँदैन। हामी यो लडाईमा एक्लो छैनौं। हाम्रो संघर्षले हामीलाई बलियो बनाउँछ र हामी को हौं भनेर बनाउँछ।
वित्त मा ध्यान केन्द्रित गर्दै: सारा पीट संग साक्षात्कार
कसरी सारा पीटले सामाजिक ndingणको सार र १टीपी of टिटीका मानिसहरूलाई समात्छ भनेर अन्तर्दृष्टि।
सारा पीट एक भावुक फोटोग्राफर हो जो गन्तव्य विवाह फोटोग्राफीमा विशेषज्ञता गर्दछन् र मूलतः भर्मोन्टबाट। उनले हाम्रो नयाँ वेबसाइटको लागि हाम्रो Lending Circles सदस्यहरू र स्टाफका कथाहरू क्याप्चर गरे र हामी उनको महान कामको पछाडि कथा साझा गर्न पाउँदा खुसी छौं!
फोटोग्राफी को माध्यम बाट कहानी कथन गर्न को लागी सबैभन्दा उत्तम तरिका के तपाइँलाई लाग्छ?
साँचो अनुकम्पा राख्नु र विषयहरूसँग इमान्दारीपूर्वक कुराकानी गर्नु उनीहरूको कथाहरू साझा गर्ने उत्तम तरिका हो। मलाई लाग्छ कि तस्बिरहरू लिनु अघि तपाईंले खिच्नु भएका मानिसहरूका बारेमा जति धेरै जानकारी लिनु राम्रो हुन्छ। उनीहरूको ईतिहास र भावनाहरू महसुस गर्न पाउँदा खुशी लाग्छ। मलाई लाग्छ कि मानिसहरु तपाई संग सहज छन् सँधै सच्चा र बताउने छविहरु बनाउँदछन्। साथै उनीहरूलाई आराम गर्न प्रोत्साहित गर्नु एक राम्रो तरिका लाग्छ तिनीहरूलाई बिर्सनुको लागि कि उनीहरू फोटोग्राफर भइरहेको छ। यसले छविमा उनीहरूको प्राकृतिक सेल्फहरू आउन अनुमति दिन्छ। फोटो खिच्दै खाली ठाउँहरूमा जुन यो विषयको व्यक्तिगत हो आफ्नो संसारको सबै थोरै विवरणहरू देखाएर उनीहरूको जीवनको कथा सुनाउँदछ। भावना उनीहरूको अभिव्यक्ति मार्फत व्यक्त गर्न सकिन्छ र विषयवस्तुमा गरिएको गतिविधि।
तपाइँको प्रक्रिया कस्तो छ जब तपाइँ नयाँ परियोजना सुरु गर्नुहुन्छ?
परियोजनाहरूमा काम गर्दा मलाई व्यक्तिको व्यक्तिगत कथाहरू सुन्ने मौका मिल्छ र चित्रहरूको माध्यमबाट उनीहरूलाई कागजात दिन्छ। म अनुसन्धान गर्छु एक कम्पनी को इतिहास, व्यक्ति, संगठन, आदि र मैले छविहरूको साथ क्याप्चर गर्दै छु कहानीको बारेमा मैले सकेसम्म धेरै विवरणहरू पत्ता लगाउनुहोस्। म विषय फोटोग्राफर गर्न र प्रकाश अवस्थाहरूको लागि राम्रो सेटिंग्सको लागि स्थान स्काउटिंगमा समय खर्च गर्छु। म तस्विरहरू लिने दिनको समयको नजिकमा स्काउट गर्न खोज्छु, त्यसैले मलाई थाहा छ कि प्राकृतिक प्रकाशले उत्तम ढ will्गले काम गर्दछ, वा यदि थप प्रकाश आवश्यक पर्दछ। मलाई नयाँ व्यक्तिहरू भेट्नु र उनीहरूको जीवनको विवरण सुन्न मन पर्छ, म स्वाभाविक रूपमा जिज्ञासु छु।
Mission Asset Fund मा आर्थिक र सामाजिक न्याय दुई महत्वपूर्ण मानहरू छन्। तपाईं ती फिल्महरूमा ती अवधारणाहरू कसरी कब्जा गर्न सक्षम हुनुहुन्छ र यो गाह्रो थियो?
आर्थिक र सामाजिक न्याय सबै छविहरूमा मैले प्रचलनमा ल्याएको मानहरू प्रचलनमा छन्। मैले मानिसहरु लाई सुविधाजनक र एक लेन्डिंग सर्कल को हिस्सा को फोटो लिएको छु - जो मानिसहरूलाई आर्थिक अवसरहरु प्रदान गर्दछ कि अन्यथा थिएन। मैले बढ्दो व्यापारको दस्तावेज बनाएको छु जुन एमएएफ़ द्वारा समर्थित थियो र सुरक्षित जीवन स्थिति, उच्च शिक्षा, स्वस्थ खाना, र अन्य धेरै सफलताहरू प्रदान गरेको छ। धेरै व्यक्तिहरू बढेको छ र गरीबी र कठिनाई माथि उठेको छ किनभने महान समर्थन प्रणाली एमएएफ प्रदान गर्दछ। व्यक्तिहरूको सफलताको बारेमा सुन्न पाउँदा ठूलो खुशी लाग्यो किनकि उनीहरूले आफ्नो वेबसाइट बनाउन मैले खिचेका फोटोग्राफहरू प्रयोग गर्थे, जसले तिनीहरूको कम्पनीलाई विस्तार गर्न र बढाउन मद्दत गर्‍यो। मैले खुशी र गर्वका क्षणहरूको दस्तावेजीकरण गरे जुन आर्थिक र सामाजिक न्यायको अवधारणालाई व्यक्त गर्दछ जस्तै गर्वपूर्ण शेफ उनको आफ्नै रेष्टुरेन्टमा खडा छ वा उनको स्वतन्त्र खाना कार्टको अगाडि वा आफ्नै घरमा अपमानजनक विगतबाट टाढा छ।
हामीसँग तपाईंको समयदेखि तपाईंको मनपर्ने फोटो कुन थियो र यसको पछाडि कथा के थियो?
मलाई एलिसियाको कथा थाहा पाएर साँच्चिकै रमाईलो लागेको छ (को एलिसियाको तामलेस लस मायास)। उनी यस्तो दयालु, मायालु र न्यानो व्यक्ति हुन्। मलाई उनको फोटोहरु मन पराउँछन् र उनी आफ्नै स्वतन्त्र खाना कार्टको अगाडि उभिएकी छन्। उनले वास्तवमै कडा मेहनत गरी सकेकी छिन् र उनी एमएएफ़ र उनको वरपरका सबै समर्थनको लागि पनि सराहना गर्दछिन। भेरोनिका एल Huarache लोको पनि एक धेरै सफल व्यापार छ र मलाई उनको आफ्नै रेस्टुरेन्टको उनको भान्सामा कागजात कागजात मनपर्‍यो। मलाई पनि सबै संग फैलिएको हेर्न मन पर्थ्यो सपनाहरु। यो धेरै राम्रो को लागी हेर्न को लागी हेर्न को लागी धेरै विभिन्न अनुहार को MAF द्वारा सहायता को अनुहार को कोलाज हेर्न को लागी छ।
तपाईले मन पराउनु भएको कुरा के थियो MAF को साथ प्रक्रियाको क्रममा?
मलाई मीठो सफलताको कथाहरू सुन्न मन पर्यो जुन एमएएफ़को साथ काम गरेर आएकी छ। संसारमा यति धेरै दुरुपयोग, नकारात्मकता र स struggle्घर्ष छ, त्यसैले यो खुशीको लागि ध्यान केन्द्रित गर्न साँच्चै राम्रो भएको छ, समर्थन, सफलता र कडा मेहनत गरिरहेका मानिसहरूका लागि सहयोग र सहयोग। यो सुनेर खुसी लाग्यो कि मानिसहरूले त्यस्तो राम्रो संगठनसँगको सम्बन्ध मार्फत कसरी आफ्नो जीवनको स्थिति सुधार गर्न सक्षम भएका छन्।